Travel & Tour Manager Archives - Glory Assumption Space
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ ရှိ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္မဏီ ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ 1.	Travel & Tour Manager / Male ( or ) Female (5) Posts / Salary – Negotiable -	Any Graduate. -	(5) Years Experience in related field. -	Willing to Travel. Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။